Oct 12, 2020· Musiyazviriyo said pervasive starvation that has ruined mayhem in the small mining area has forced women and children to join the hordes of people seeking their fortune through the latest gold heist. MDC Member of Parliament for Mutasa South constituency that covers Penhalonga
Gold panners threaten Penhalonga water NewsDay Zimbabwe
The issue of gold mining is not new in Penhalonga. Mining Zimbabwe our core focus is the Zimbabwe Mining Industry, Zimbabwe Mining News, trends, new technologies being developed and used to improve this crucial sector, as well as new opportunities and investments arising from it.
Home Zimbabwe Illegal gold mining puts Mr Kingston Chitotombe acknowledged the presence of widespread illegal gold mining activities in the Penhalonga area and the dangers associated with the
May 05, 2020· Source: Gold panners threaten Penhalonga water sources NewsDay Zimbabwe. Water reservoirs in Penhalonga face contamination and collapse if the Mines ministry fails to stop illegal mining in the area, Mutasa South legislator Regai Tsunga (MDC Alliance) has warned.